musha / Dzidzo & Tsvakurudzo / tsvakurudzo / Forex News
Rarama Live Forex News
FXCC inoedza kuchengetedza vatengesi vedu veFX nguva dzose vachiziviswa nekudhinda: kuputsa mashoko, maonero, chokwadi, zviyero, zviyeuchidzo nezvimwewo munyaya yedu yeFX nhau. Tichakuchengetedza iwe, kuburikidza nehutano hwedu hwemagariro evanhu, nehukama kune zvinyorwa zvedu zvose.
Vose vatengesi vane ruzivo vachapupura pamusoro pekuti macro makuru ezvehupfumi nepamusoro-soro inokonzerwa nehuwandu hwemari mari. Zvingave iwe uri mucheche; zvichida achishandisa nzira dzekutengeserana uye nyanzvi dzevanyanzvi hwokutengesa misika yeFX, iyo inofanirwa kuita mheni inofambisa mafashoni. Kana iwe uri mutengesi wekutengesa; uyo anotora imwe nzira yekufungidzirwa asati agumisa kana kuchinja mutungamiri wekutengeserana, kuramba uri pamusoro pezviitiko zvenhau chinhu chinonyanya kubudirira chinenge chichitengesa FX.